DAAWO: Somaliland oo jawaab adag u dirtay Puntland, kuna hanjabtay..
September 7, 2019 NEWS 3
HARGEYSA(P-TIMES) – Taliska ciidamada Somaliland ayaa ka jawaabay hadal kasoo yeeray Taliska ciidamada Puntland, oo ku wajahnaa in ay Somaliland iyo SHabaab is kaashanaya weerar ku soo yihiin magaalada Badhan ee gobalka Sanaag.
Abaanduulaha ciidamada Somaliland Sareeye guuto Cabdirisaaq Siciid Bu’aale ayaa sheegay in hadlaka Puntland kasoo yeeray uu yahay mid gaf ku ah dhankooda, isagoo sheegay in aysan Somaliland waxba xarumo ah ku laheyn burcad Badeed iyo Al- Shabaab toona.
Sareeye Guuto ayaa sheegay in Puntland looga baahan yahay in ay hoos u eegto deegaanadeeda, gaar ahaana meelaha iyo xarumaha ay Al- Shabaab iyo Daacish ku leeyihiin deegaanadaas.
Somaliland ayaa sheegtay in ay Badhan tahay dhul Puntland, Xadka Somaliland uu Boosaaso u jiro 15KM, isla markaasna Qardho 4KM u jirto Xaduudahooda, ayna ka shaqeynayaan sidii ay ciidamadooda u tagi lahaayeen.
Taliska ciidamada Somaliland ayaa sheegay in ay garanayaan dagaal wuxuu yahay, aysana dhankooda ku dhawaaqeyn oo ay garanayaan waxyaabaha ka dhasha, Shacabka Badhan wuxuu ugu yeeray in ay ka fiirsadaan hadaladooda.
Issirkaada Allaha gub! kuye “issir” kuye! waxa issir ku digriya oo quudka uu yahay waa adiga sheegasho io caay waa mid aad kucaan baxdeene! Aflagaado intaas uGu filian reer Sanaag Alsheeydaan ama inkir ama is been hawaas lkn caalamka aad sheegeeyso waa kula socdaan waxa aad tahay. Wiilkii Siilaanyo, wiilkii faisal faaruq, io wasiiradiina kale io weliba hogaamiyiiihii Godaana miyaad inkireeysaa?
SOMALIA WAA MID AMA BAROORO AMA LAFAHAHA XOOLAHA SOO ARUURSO!
Addunka waxaa soo dhowaaday ” yowmul qiyaamihi ” Bal Isaaq laga hayo dhul uusan lahayn shaqana ku lahayn, bal iidoor ku fekeraya in uu dawlad uu leeyahay ku dul sameysto dhul uusan lahayn weligiisna arag.
waa adduun aakhiro sabaan Nijaas habar awal ah in uu ku fekero sanaag in uu dhul ka samaysto.
Colonel caare hadalki uu uso diray suldaanka warsangeli wuxu ku yiri
” Anaga idiin keenay oo idin soo jiidnay qashinkan habar awal anagaana hadda qashinki idin ka qaadi doona xaalna waanu ka bixinayna dhibaatadaas aanu isin soo jiidnay ”’
ANIGUNA WAXAAN LEEYAHAY VIVA JABHADDA DULMI DIID.
Maamulka hargeeysa ee ay xamar meelkasta ka soo ooday waa lagu yaqaan faan iyo falax gootan been ah.Illaa iyo waagii la dhisay puntlaan bay soo lahaayeen waxaan qabsanaynaa garoowe iyo boosaaso.Wax ay qabsadaan iskadaaye ayagii baa sii kalo firiray.
Tan labaad waa u gaf iyo qalad maamulka soomalilaan in uu sheegato dhul iyo dad an waxba u ahayn ama aysan shaqo ku lahayn.Saan meeshaan ka soo sheegay marar hore soomaaliya way kala guurtay.Nin walbana waxuu u guuray meeshuu awoowgiis ku dhashay.Waxuuna raacay intii la hayb ahayd.Saas darteed waa rajo been ah in ay hargeeysa sheegto beelo an la hayb ahayn.Xuduudaha u dhaxeeya beelaha Isaaq iyo kuwa Daarood waa la wada yaqaan oo shaki kuma jiro.Hargeeysana u suuroobi mayso in ay xoog ku qaadato dhul aysan deegaano ku lahaan jirin iyo dadkiis.Hargeeysa yaysan ilaawin in aan beelaha Daarood waligood beelkale u talin.Hase ahaatee Daarood waligoodba diyaar bay u ahaayeen una yahiin daris wanaag iyo u saburid loo saburo dadyawga dariska la ah.